घरमा शंख किन राखिन्छ ? यस्तो छ खास कारण - Kamana News
घरमा शंख किन राखिन्छ ? यस्तो छ खास कारण
काठमाडौँ । हिन्दु संस्कृतिमा शंखलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । शंखमा ॐ ध्वनि प्रतिध्वनित हुन्छ । पुराण र शास्त्रमा शंख ध्वनिलाई अत्यन्त कल्याणकारी मानिन्छ । वास्तु शास्त्रमा समेत शंख ध्वनी अर्थात शंखनादबाट कुनै पनि स्थानको नकारात्मकता नष्ट गर्न सकिन्छ ।
मंगलवार, पौष २१ २०७७०६:४७:१२